Fampiharan’ny CUA ny lalàna: noraofina ireo taxi-moto sy taxi-ville tsy ara-dalàna… - ewa.mg
Fampiharan’ny CUA ny lalàna: noraofina ireo taxi-moto sy taxi-ville tsy ara-dalàna…
News - Fampiharan’ny CUA ny lalàna: noraofina ireo taxi-moto sy taxi-ville tsy ara-dalàna…
Tsy hisangy manoloana
ny fihoaram-pefy. Niditra an-tsehatra ny eo anivon’ny fiadidiana ny
Tanànan’Antananarivo amin’ny fampiharana ny lalàna. Noraisina avy
hatrany ny fepetra tamin’ny fanasaziana ireo manao fitaterana tsy
stratejikan’ireo eo anivon’ny taxi (CSST) sy ny CUA ary ny
Polisim-pirenena, miaraka amin’ny Polisy monisipaly. Nambaran’ny
talen’ny fitaterana eo anivon’ny kaominina, i Bemanana Vigor, fa
tafiditra amin’ny hetsika lehibe iadiana amin’ny taxi-moto sy ny
taxi-ville tsy ara-dalàna izao. « Mijaly ny taxi-be sy ny
taxi ara-dalàna amin’ny ataon’izy ireo. Aseho koa ny fijoroan’ny
CSST iadiana amin’ny tsy fanarahan-dalàna. Miditra avy hatrany
« fourrière » ary mihatra ny sazy henjana satria tsy
manana fahazoan-dalana hanao ilay asa izy ireo ary naman’ny
mangalatra », hoy izy.
Nanteriny fa maso sy sofina eny
amin’ny tontolon’ny taxi ny eo anivon’ny CSST ary mahalala ireo
miasa antsokosoko sy tsy nahazo alalana. « Mifandray sy
mijery ireny fiantsonan’ny taxi-moto ireny ary mampita izany aty
amin’ny CUA », hoy ihany izy.
Tsy vitan’izany fa noraisina koa ny
fepetra amin’ireo taxi-be tsy manaja ny
« arrêt ». Mampikatra na mampidina mpandeha
amin’ny toerana rehetra, tsy tokony hijanonana. Tokony hahay hanaja
izany koa anefa ny mpandeha.
Etsy andaniny, tokony hitohy sy ho
tonga amin’ny fanaraha-maso sy ny fanasaziana ireo taxi-be, miditra
eto an-dRenivohitra, mihodina an-dalana, izao hetsika izao.
Iarahana indray kosa amin’ny Antokon-draharaha misahana ny
fitaterana an-tanety (ATT) sy ny CUA izany amin’ny tsy maintsy
hanajana ny bokin’andraikitra.
Zotra Ivato sy ny eny
Betsaka ireo mpitatitra mampijaly
ireo mpandeha amin’ny tsy fahatongavana any faran’ny fiantsonana.
Ohatra ary anisan’ny tafiditra ao anatin’izany ny avy eny Itaosy,
mihazo an’Analakely, nefa mihodina etsy amin’ny Fiaro, Ampefiloha.
Na ny avy eny Ivato tokony ho tonga etsy Vassacos fa mihodina eny
Vatobe 67 ha, ankoatra ireo zotra hafa zatra gaboraraka sy tsy
Mba tsy ho afo-mololo fotsiny ihany
koa anefa izao hetsika izao.
L’article Fampiharan’ny CUA ny lalàna: noraofina ireo taxi-moto sy taxi-ville tsy ara-dalàna… a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 07/10/2020
Campagne de reboisement : Comdata Madagascar rejoint l’initiative de Bôndy
Le 14 novembre 2020, les collaborateurs de Comdata Madagascar ont décidé de soutenir le projet de reboisement inclusif et durable de Bôndy à Andramasina. L’équipe a ainsi contribué à la reforestation de Madagascar en mettant en terre 1 500 plants durant la journée de samedi. Et elle ne compte pas s’arrêter là puisqu’elle ambitionne de redoubler d’effort pour la prochaine campagne. Notons que les types de plants utilisés ce jour-là ont été choisis selon les besoins de la communauté locale d’agriculteurs. Recueillis par Anja RANDRIAMAHEFA L’article Campagne de reboisement : Comdata Madagascar rejoint l’initiative de Bôndy est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Campagne de reboisement : Comdata Madagascar rejoint l’initiative de Bôndy a été récupéré chez Midi Madagasikara.
684 ny fitoriana voarain’ny HCC: amin’ny 2 jolay ny voka-pifidianana ofisialy
Andrasana amin’izao ny vokatra ofisialin’ny fifidianana solombavambahoaka natao ny 27 mey lasa teo. 684 ny fitoriana voarain’ny HCC, hamoaka ny voka-pifidianana ny 2 jolay ho avy izao.“684 ny isan’ireo fitoriana voaray eto anivon’ny HCC. Efa mamaramparana ny asa izahay satria voafetran’ny lalàna ihany koa ny hamoahana ny valim-pifidianana. Hivoaka tsy ho ela, angamba, ny valim-pifidianana.” Io ny tatitry ny talen’ny kabinetran’ny HCC, Andrianirina Ratsarazaka Ratsimandresy, teny Ambohidahy, omaly, momba ny famoahana ny voka-pifidianana solombavambahoaka ny 27 mey lasa teo, izay hatao ny 2 jolay ho avy izao.Tsy maintsy halamina ny fandaharam-potoana rehetra momba an’izay miaraka amin’ireo mpanolotsaina avo. Eo am-pandinihana izay fomba tsaratsara kokoa hanaovana izany ny HCC amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavany. Mba tsy hahamonamonaina izany, na ho lavabe loatra ny fotoam-pitsarana amin’io andro io.Tsy maintsy hotononina tsirairay ny solombavambahoaka voafidy amin’ireo distrika 119. “Miasa andro aman’alina ny HCC mba hahazoana mamoaka vokatra tsara ho an’ny vahaoaka malagasy”, hoy izy.Mijery ny PV tsirairay ny HCCMijery ny fitanana an-tsoratra (PV) tsirairay avy amin’ny distrika 119 ny eo anivon’ny HCC, ary manao fampitahana sy fanamarihana raha mitovy izany na tsia. Raha misy tsy mitovy: aiza ny tsy mitovy, inona ny anton’ny tsy itoviany… ? Raha ilaina, afa-mangataka ny dikan’ny PV any amin’ny Ceni ny HCC. Mba ho marim-pototra ny vokatra havoakan’ny HCC.Efa misy 50 na 60 mahery any ny PV nangatahina tany amin’ny Ceni, araka ny fanazavany ihany. Misy tsikaritra, ohatra, indraindray fa lasa ambony be ny isan’ny vato fotsy sy ny vato maty. Hamarinina amin’izany ny antony nanaovana azy ho vato fotsy na vato maty: tena mitombina ve izay? Anjaran’ny mpanolotsaina avo ny mandray ny fepetra momba an’izay rehefa hita fa misy zavatra tsy mitombina ao anatiny. R. Nd. L’article 684 ny fitoriana voarain’ny HCC: amin’ny 2 jolay ny voka-pifidianana ofisialy a été récupéré chez Newsmada.
Karate : hanao fifaninanana “Kata en ligne”
Manomboka mihetsiketsika ihany koa ny eo anivon’ny federasiona malagasy ny ta­ranja karate, amin’izao fotoana. Raha toa ka mbola tsy azo eritreretina ny fahafahana manatanteraka fifaninanana hatrehin’olona mihoatra ny 200, nikaroka hevitra ny FMK. Araka izany, hisy ny fifaninanana eo amin’ny sokajy Kata, amin’ity oktobra ity. Amin’ny endriny hafakely ny hisehoan’izany satria hampitaina amin’ny fifandraisan-davitra ny fifaninanana, noho ny tsy fahafahana mamory olona betsaka amin’ny toerana iray. Mbola hisy moa ny fampahafantarana amin’ny fomba ofisialy an’ity fifaninanana ity, ataon’ny federasiona mala­gasy ny karate. Ho fantatra amin’izany ny mahakasika ny fi­tsipika mifehy ny fifaninanana sy ny fomba hanatanterahana izany. Ny azo antoka kosa, dia tsy maintsy atao amin’ity volana oktobra ity ny fifaninanana. Ho an’ny seksiona Antana­narivo renivohitra, eo an-dalam-pamaranana ny fanomanana ny fifidianana, amin’ izao, ny komity mpikarakara.Mi.RazL’article Karate : hanao fifaninanana “Kata en ligne” a été récupéré chez Newsmada.
Ambohimangakely : Mpamaky trano 11 nidoboka am-ponja
Andro maromaro taty aoriana, tratra ireo andian-jiolahy mpamaky trano ao amin’ny Antanitibe Ikianja kaomina Ambohimangakely, ny alin’ny alarobia 7 novambra lasa teo, izay nahafatesana raim-pianakaviana iray. Araka ny fantatra olona miisa 11 no voasambotra, izay voampanga tamin’ny raharaha fanafihana, izay nahafatesana olona iray. Tsy afa-maina teo anatrehan’ny mpampanoa lalana kosa ireto olona voasambotra ireto fa dia nampidirana am-ponja vonjimaika Nanao ny fikaroham-baovao avy hatrany ny zandary taorian’ny naharaisana fitarainana, ka izao nahitam-bokany izao. Tsy vao sambany ihany no nitrangana fanafihana mitam-piadiana sy vaky trano eny amin’iny faritra iny, ka nanaovana fisavana avokoa ireo andian-dehilahy mivorivory teny amin’ny manodidina. Araka ny loharanom-baovao voarain’ny zandary tao an-toerana dia heno fa misy andian-jatovo, miloka no sady mifoka rongony tao amin’ny tanàna antsoina hoe Mahatsara, Fokontany Betsizaraina. Nidina avy hatrany tao amin’io tanàna io ny zandary ary tratra avokoa izy ireo. Rehefa natao ny famotorana dia hita fa nampiahiahy ny zandary ny fihetsik’ireto andian-jatovo, ka nosamborina avy hatrany, ka nantsona ireo olona niharan’ny fanafihana tao amin’ny kaomina Ambohimangakely, tamin’ity nahafatesana olona ity hamantatra azy ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana dia tadidin’ireo fianakaviana voaroba avy hatrany ireto nandray anjara nanao ny fandrobana, ka notazonina nanaovana famotorana. Sarona nandritry ny fisavana avokoa ireo fitaovam-piadiana nentin’ireo mpamaky trano toa ny antsilava anakiray niampy tornevisy lehibe ary koa zava-mahadomelina. Valérie R. L’article Ambohimangakely : Mpamaky trano 11 nidoboka am-ponja est apparu en premier sur .L’article Ambohimangakely : Mpamaky trano 11 nidoboka am-ponja a été récupéré chez Triatra.
Ankatsaka -Toliara…: jiolahy maty rotiky ny balan’ny polisin’ny UIR
Manoloana ny tsy fandriam-pahalemana ao Toliary noho ny asan-jiolahy amin’izao fotoana, mitohy ny famongorana ataon’ny mpitandro filaminana ao an-toerana ka jiolahy niisa roa no maty lavon’ny balan’izy ireo, afakomaly…Naharay antso ny polisy miasa ao amin’ny commissariat central Toliara (CC Toliara), afakomaly fa misy jiolahy roa mitana fitaovam-piadiana mahery vaika mandravarava ao anaty haizina ireo olona mandalo ao amin’ny faritra Ambalanikamo, akaikin’ny Lycée Laurent Botokely Toliara. Lasan’ireo jiolahy ny kitapo nisy vola tany amin’ny vehivavy iray ka nirifatra nitsoaka ireo olon-dratsy. Tonga ara-potoana ny mpitandro filaminana ka raikitra ny fifanenjehana. Basy PA miaraka amin’ny bala miisa telo sy basy vita frantsay miaraka amin’ny bala iray no nentin’ireo jiolahy. Vantany vao nahatazana ireo polisy lavitra anefa ireo jiolahy dia nampiasa ny basy tany amin’izy ireo, raikitra teo ny fifampitifirana. Nisy ny fifandonana tao anaty haizina ka teo no nahalavo ireo jiolahy. Tsy nisy kosa ny naratra na aina nafoy teo amin’ireo polisy. Nomarihin’ny polisy fa isan’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana ao Toliara ireto nifanandrina tamin’ny polisy ireto. Mitohy hatrany ny fikarohana ataon’ny polisy hamongorana ireo jiolahy ao Toliara. Raha ny loharanom-baovao voaray avy any an-toerana, matetika ahitana trangana tsy fandriampahalemana iny faritra iny noho ny tsy fisian’ny jiro manazava ny lalana. Rehefa manao ny asa ratsiny ireo jiolahy, miditra amin’io fokontany Ankatsaka io.CMS/Jean ClaudeL’article Ankatsaka -Toliara…: jiolahy maty rotiky ny balan’ny polisin’ny UIR a été récupéré chez Newsmada.
Filankevitry ny minisitra: lalàna vaovao ho famerenana vola vahiny
Tapaka tamin’ny filankevitry ny minisitra, ny 30 jona 2021 ny famolavolana lalàna vaovao ho famerenana vola vahiny eto an-toerana. Nankinina amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola izany andraikitra izany. Famolavolana lalàna vaovao, fanoloana ny teo aloha tamin’ny 2018, no nifantohan’ny filankevitry ny minisitra farany teo ho famerenana ny vola vahiny eto an-toerana avy amin’ny fanondranana entana.Miandraikitra izany ny ao amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, mijery ihany koa ny lalàna momba ny fifanakalozana. Fantatra fa ny tsy fiverenanan’ny vola vahiny avy amin’ireo entana aondrana no antony iray lehibe maha maiva-danja ny ariary eo amin’ny tsenam-barotra. Ka ny fahamaroan’ny vola vahiny miditra no mampatanjaka ny vola eto an-toerana, ny ariary.Matoky ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola fa avy amin’izany lalàna na didy hitsivolana vaovao izany ny hampitombo ny vola miditra. Efa nahitana fitomboana izany, hoy ny ao amin’ny minisiteran’ny Toekarena sy ny vola, raha jerena ny niditra tamin’ny 2017 hatramin’ny 2020. Nahatratra 89,37 % izay mitentina 25 000 miliara ariary (raha avadika ariary). Tamin’ny 2020, na teo aza ny krizy ara-pahasalamana, nahita 4 370 miliara ariary ihany ny fanjakana noho ny ezaka natao tamin’ny Sig-OC (Système integré de gestion des opérations de changes), ho an’ny fanafarana sy fanondranana entana.Ny vokatry ny harena an-kibon’ny tany, ny lavanila, ny fitafiana avy amin’ireo faritra afakaba no mampidi-bola betsaka indrindra amin’ireo karazana entana fanondrana any ivelany. Ny lavanila sy ny vokatra avy aminy, ohatra, nampiditra 2 315 miliara ariary tamin’ny 2019, ary 1408 miliara ariary tamin’ny 2020. Ny vokatry ny harena an-kibon’ny tany, nitondra 2301miliara ariary tamin’ny 2019, ary 1051 miliara ariary tamin’ny 2020. Ireo sehatra roa ireo, niantoka ny tahan’ny famerenam-bola 95 %. Mbola tokony ho betsaka lavitra no ho ireo ny vola vahiny miditra. R.MathieuL’article Filankevitry ny minisitra: lalàna vaovao ho famerenana vola vahiny a été récupéré chez Newsmada.
Olon-tsotra, saingy nahavita be tamin’ny asa fanompoana an’Andriamanitra, eo anivon’ny sahan’ny FJKM, Rakoto Andrianambinintsoamanitriniaina Armand. Nanomboka ny taona 1969 ny nanolorany ny tenany ho an’ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra. Nosantariny tamin’ny fampianarana izany. Avy eo, anisan’ny mpikambana tao amin’ny birao foiben’ny FJKM ny tenany. Nolaniny tamin’ny fitantanana ny kolejy Paul Minault kosa ny 10 taona farany. Araka izany, manamarika ny 44 taona niasana amin’ny fiangonana Rakoto A. Armand. Tsy nandalo fotsiny izany jobily lehibe izany fa nomarihina tamin’ny hetsika samihafa. Natao tamin’ny volana oktobra 2017 ny fanokafana. Ny volana marsa lasa teo kosa ny ivon’ny fankalazana. Ho famaranana kosa, hisy ny fotoam-pivavahana lehibe ny alahady tolakandro izao, etsy amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga. “Fisaorana an’Andriamanitra noho ny amin’ny asa nampanaoviny ahy io, sady fankasitrahan’ny mpanompony Azy”, hoy ny fanazavan-dRakoto Andrianambinintsoamanitriniaina Armand. Homarihina amim-pomba ofisialy, amin’io fotoana io, koa ny fandehanany misotro ronono, araka ny fanazavany hatrany. “Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany izahay mba ho an’Andriamanitra ny halehiben’ny hery fa tsy ho avy aminay”. Io tenin’ny soratra masina, ao amin’ny II Korintianina 4:7, io no teny faneva nosafidiny amin’izao jobily lehibe izao. Landy R.
FIER MADA 2021 : Mitobaka ny vokatry ny tany
Sambany tamin’ity Fier Mada andiany faha-22 ity no tsy nisy vahiny avy any ivelany nitsidika sy nividy ny vokatry ny tantsaha malagasy. Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy ny 04 aogositra 2021 eny amin’ny kianjan’ny Maki Andohatapenaka ny Fier Mada 2021 izay misy trano heva 300. Dimy andro ny faharetan’ity foara ho an’ny tantsaha ity izay hifarana ny alahady 8 aogisitra 2021. Nisy fiovana ny fomba fiasan’ny mpikarakara satria nipaka teny amin’ireo tantsaha mivantana ny fanentanana ny hampisehoan’izy ireo ny vokatra ananany. Ny governoran’ny faritra no niara- niasa nahitana ireo tantsaha ireo, hoy i Ramanantsoa Jacques, filoha mpanorina ny Fier Mada. Na izany aza anefa dia tsy afaka nitondra tantsaha betsaka ny governora noho ny antony samihafa. Raha folo teo aloha dia telo tamin’ity andiany ity. Niezaka ny tantsaha nivarotra nivantana ny vokatr’izy ireo tsy misy mpanelanelana mandritra ity foara ity. Tsy niantehitra amin’ny tetikasam- panjakana ry zareo izay vatsian’ny vahiny vola, hoy izy. Sady efa niomana ihany koa izy ireo satria tsy maintsy hisy ny Fier Mada ka niomana amin’ny vokatra hamidy sy ny vola ho enti-manana amin’izany. Misy ireo vokatra tsy hita eto antananarivo kanefa misy eto Madagasikara izay hita ato amin’ny Fier Mada zany. Eo amban’ny fiahian’ny ministeran’ny varotra ity hetsika ity. Ny ministera no tokony hitarika amin’ny fampadrosoana iray manontolo ny tsenam-barotra eto an-toerana sy any ivelany, hoy hatrany izy. Trano eva roa ny an’ny ministera ka azo antonina raha mila fanazavana momba ny fandraharahana amin’ny ankapobeny. 40% ny mpitsidika dia olona am-perinasa ka manomana ny fisotrodronony ka mikaroka ny ho atao rehefa tonga izay fotoana izay mba hidiram-bola. Ra-Nirina Cet article FIER MADA 2021 : Mitobaka ny vokatry ny tany est apparu en premier sur déliremadagascar.L’article FIER MADA 2021 : Mitobaka ny vokatry ny tany a été récupéré chez Délire Madagascar.
Sarimihetsika malagasy: hivoaka ny DVD « Manompo masira »
Ela niandrasana… Rehefa avy nankafy ny “Don-tandroka 2”, mitohy hatrany ny horonantsary vokarin’ny Out linemovies. Hivoaka manerana ny Nosy ny horonantsarimihetsika malagasy « Manompo masira” vokarin’izy ireo. Ny alarobia 26 mey ho avy izao no anapariahana izany ho an’ny mpankafy ny sarimihetsika malagasy. DVD “original” izy ity , ahitana lafim-piainana maro amin’ny endriny samihafa, ao ny mahatsikaiky, ny alahelo, ny fiarahamonina sy ny sisa… Marihina fa maro ireo efa sangany amin’ny mpilalao sarimihetsika eto Madagasikara no handray anjara ao anatin’ity “Manompo masira” ity… “Tsy latsa-danja amin’ny efa novokarina hatramin’izay izy ity, fa hanome fahafinaretana tanteraka ho an’ny mpianakavy, satria natao ho an’ny olon-drehetra izy ity”, hoy ny tompon’andraikitra ao amin’ny Out Linemovies. Amin’izao valanaretina coronavirus izao, tsy dia tsara ny mivoaboaka fa aleo manafana sy mampifaly ny ankohonana sy ny fianakaviana, anisan’ny vahaolana amin’izany ny fijerena horonantsarimihetsika.NarilalaL’article Sarimihetsika malagasy: hivoaka ny DVD « Manompo masira » a été récupéré chez Newsmada.